कुलमानको कार्यकाल आज सकिँदै, को बन्ला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक ? - Deshko News Deshko News कुलमानको कार्यकाल आज सकिँदै, को बन्ला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक ? - Deshko News
कुलमानको कार्यकाल आज सकिँदै, को बन्ला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आइतबार सकिँदै छ । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान चार वर्षे कार्यकाल सकेर सोमबार बिदा हुँदैछन् । कुलमानको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्राधिकरणमा नयाँ प्रमुख को बन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ। सोही बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिाषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिने प्रावधान छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट